शरीरमा रगत जम्ने समस्याबाट छुटकारा पाउन यी ५ जुस पिउनुहोस् ! « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
शरीरमा रगत जम्ने समस्याबाट छुटकारा पाउन यी ५ जुस पिउनुहोस् !
बर्तमान समयमा धेरै मानिसहरु अस्वस्थकर जीवनशैलीका कारण मानिसहरु विभिन्न प्रकारका रोगहरुबाट ग्रसित बन्ने गरेका छन् । अहिलेको समयमा मुख्य समस्या भनेको मुटुसम्वन्धी देखिरहेको छ ।
मुटुसम्बन्धी धेरै समस्याहरूको कारण अस्वस्थकर जीवनशैली नै हो ।मुटु रोगको अर्को कारण धुम्रपान पनि हो । मुटु रोगमा विशेषगरी रक्तनलीहरूमा रगत जम्ने खतरा बढी हुन्छ ।
धमनीहरुमा रगत जम्नाले रक्तनलीहरु अवरुद्ध हुन सक्छन् । जसको कारण रगतको बहाव सही हुन पाउँदैन । रगतहरु जम्न थाल्छन् र हृदयघात हुने खतरा बढ्छ ।
रगत जम्ने समस्या विभिन्न कारणले हुन सक्छ । त्यसका लागि आफूले खाने खानपानमा बढी ध्यान दिँदा रगत सफा हुने र थप समस्या हुनबाट बच्न सकिन्छ । यसका लागि स्वस्थकर खानासँगै विभिन्न प्रकारका जुसहरु पिउन सकिन्छ ।
1. अदुवा, लसुन र कागतीको रस
2. गाजर र चुकन्दरको जुस
गाजर र चुकन्दरको जुस पिउँदा धमनीहरु सफा हुन्छन् । चुकन्दरले रक्तचाप पनि कम गराउँछ । चुकन्दरमा नाइट्रेट्स हुन्छ । जुन शरीरभित्र गएर निट्रिक ऑक्साइड मा परिवर्तन हुन्छ । निट्रिक ऑक्साइडले धमनीहरु खुलाउँछ । साथै, गाजरमा नाइट्रेट हुन्छ । जसले रगतको बहाव राम्रो बनाउँछ । यो रक्तनलीहरु खोल्ने एक राम्रो उपाय हो । गाजरमा हुने बेटा केराटिनले रक्तसञ्चार राम्रो बनाउँछ । र मुटुसम्बन्धी रोगहरु लाग्न दिँदैन ।
3. ब्रोकाउली, पालक र गोभीको जुस
4.काँक्रो, पुदीना र सेलेरीको जुस
अमिलो फलफूलहरु सुन्तला, कागती, अंगुर जस्ता फलफूलका जुसमा एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्ट । जसले इन्फामेसन कम गराउँछ । यसले रगत जम्ने खतरा पनि कम हुन्छ । साथै, भिटामिन सीका कारणले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउँछ ।
प्रकाशित मिति: Jun 8, 2021
थाहापाउनुहोस् बासी रोटी सेवन गर्दा हुन्छन् यी फाइदा !
मानव स्वास्थ्यका लागि रोटी खानु राम्रो मानिन्छ । अहिले पछिल्लो समयमा झन रोटीको सेवन बढ्दो
पेटका रोगबाट बचाउने घिरौलाका यस्ता छन् १० फाइदा जान्नुहोस् !
घिरौला हामी सबैलाई थाहा भएको र हामीले भान्सामा तरकारी बनाउदैँ खादैँ पनि आएका हौंला ।
जान्नुहोस् : मिर्गौला सुन्निएको हामीले कसरी थाहापाउने? यस्ता छन् लक्षणहरु !
आजभोलीको समयमा धेरै मानिसहरु मिर्गौला रोगको शिकार भइरहेका छन् । किनभने अहिलेका शहरीया जीवनयापन र
मोटोपनबाट छुट्करा पाउन OBESLIM प्रयोग गर्नुहोस्, यस्ता छन् विशेषता !
अहिले मानिसहरु धेरै सुविधा सम्पन्न हुदै गइरहेका छन् । जसको कारण उनीहरुले पसिना आउने गरी
पहेँलो दाँतलाई दाँत कसरी सेतो र चम्किलो बनाउने ? यस्ता छन् घरेलु उपाय !
भनिन्छ मानिसको सुन्दरता भनेको उसको दाँतमा हुन्छ । साच्चिकै हो पनि मानिसको आत्मविश्वास बढाउने काम
के हो पेप्टिक अल्सर? जान्नुहोस् यसका लक्षण तथा बच्ने उपाय !
अहिलेको बद्लिदो हावापानी र खानपिनका कारण अधिकाशं मानिसलाई पेटको रोग बढी लाग्ने गर्छ । सबै